Ekpere nye Saint Nicholas nke Bari maka nchekwa. ? [+ Dị Ike]
Ekpere Holy Nicholas nke Bari
Ekpere Holy Nicholas nke Bari maka nchekwa ma ọ bụ maka ebum n’uche ọzọ ọ bụ omume na-esite n’oge ochie n’ihi na site na mgbe ahụ ruo taa, e nwere ọtụtụ ọrụ ịtụnanya maka arụ ọrụ ebube a.
A na - ekwu na ọ bụ onye na - ahụ maka ihe ndị siri ike kpatara na otu n'ime ọrụ ebube mbụ amaara ama bụ inyere nna na - enweghị ogbenye aka akpụkpọ ụkwụ ma ọ bụ akpa juputara na ọla edo nke ọ tụfuru na windo idozi ọnọdụ ya siri ike ma nwee ike ịchekwa ya. rue ụmụ ya ndị nwanyị nke ụzọ ọjọọ.
Ọ bụ maka nke a na ọtụtụ ihe ndị ọzọ mere onye senti a ji bụrụ onye anyị na ya ga-agbaba n’ime oge ndị ahụ siri ike nke pụtara dị ka nne na nna, na-amara na ọ dị n’aka ya enyemaka anyị chọrọ, agbanyeghị ka o siri sie ike ọnọdụ ma ọ bụ otú nnukwu ọrụ ebube dị mkpa.
1 Ekpere Saint Nicholas nke Bari Onye bu Saint Nicholas nke Bari?
2 Ekpere Saint Nicholas nke Bari maka nchebe
2.1 Kedu ka ekwesịrị isi kpee Senti Nicholas nke Bari maka nchebe?
Ekpere Saint Nicholas nke Bari Onye bu Saint Nicholas nke Bari?
A maara na a mụrụ ya na Ọ bụ ezinụụlọ siri ike nke nwere ọtụtụ akụ na ụba. Ndị mụrụ ya bụ Ndị Kraịst na-anụ ọkụ n'obi gụrụ ya agụmakwụkwọ dabere na nkwenkwe Ndị Kraịst. Site na nwata, amara ya maka mmesapụ aka na nsọ nsọ. Nicholas bụ nwa mgbei, n'ihi ya kwa, o keta oke nnukwu ego na m anaghị egbu oge inye ndị na-achọ ya.
Nke a bụ ihe mere taa a na-anọchi anya ọnụ ọgụgụ ya na mkpụrụ ego ọla edo n'aka ya. Na mgbakwunye, aha ya mere ka akụkọ ifo nke Saint Nicholas ma ọ bụ Santa Claus bụ onye agadi na-emesapụ aka nke na-enye ụmụaka onyinye na ọnwa Disemba.
Nicolás de Bari toro ma bụrụ onye bishọp ma nwee ọgụ siri ike n'ebe ndị na-ekpere arụsị nọ.
Site na iwu eze ukwu Licinius kpọchiri ya n'ụlọ mkpọrọ ebe ọ tara gị ahụhụ site n'ọkụ afụ ọnụ ya wee tọhapụ ya site na nke Emperor Constantine. Ọnwụ ya bịara ụbọchị nke isii nke ọnwa Disemba ma ozu ya zuru ike ugbu a na Bari. Ọ ghọrọ Onye Nsọ mbụ, onye edeghị aha ya dị ka onye nwụrụ n'ihi okwukwe ya, ịnata ntinye n'aka ndị kwere ekwe n'akụkụ niile ụwa onye hapụrụ ili ya ọtụtụ akụkọ banyere ọrụ ebube nke Onye Nsọ nyere ha.
Ekpere Saint Nicholas nke Bari maka nchebe
«Oh Saint Nicholas nke Bari gọziri agọzi! onye Chineke ji ọrụ ebube a na -apụghị ịgụta ọnụ nye ya otuto na -egosipụta uche ya ka anyị bịakwute gị, n'oge ihe siri ike nke ndụ anyị, na -atụkwasị obi na nchekwa gị.
Oh ihe ijuanya nke ọrụ ebere! nke ezinụlọ, ndị ogbenye, ndị ọrịa, ndị ahịa, ndị ọrụ, ndị mkpọrọ, ụmụaka, ụmụ agbọghọ nọ n'ihe ize ndụ na -aga; Eji m obi umeala rịọ gị ka ị nye m amara m na -atụ anya n'aka gị, na -atụkwasị obi na nchekwa gị kacha baa uru, nke ị na -agọnarịghị ndị na -efe gị, ka amara gị wee kwado anyị, anyị na -abụ abụ ọzọ ebere nke Onyenwe anyị, na ihe ịtụnanya. nke ndị nsọ ya. Onye kacha enye Saint Nicholas! ahapụna m."
Ekpere a na Saint Nicholas nke Bari maka nchebe bụ ihe ịtụnanya!
Onye Saint a chebere ngwongwo ya niile ndị chọrọ ndo ma ọ bụ nye aka, ka dị ike taa inye ndị otu ezi nchekwa ahụ. Mgbe ị na-eme njem, mgbe ị na-amalite ụbọchị ọhụụ, mgbe ị na-ahapụ ụlọ na ngwongwo ndị ọzọ n'enweghị nlekọta ma ọ bụ mgbe ị nwere ọnọdụ siri ike Santo nwere ike inye anyị enyemaka n’oge kwesịrị anyị na-enye nchebe na nchebe.
Nke a, dị ka ekpere niile Ekwesịrị iji okwukwe mee ya nke ọma. Ọ baghị uru ịmụ otu ekpere maka na ọ nwere ike ịbụ n’okwu nke anyị ịbụ ezigbo ekpere. Ka anyị cheta na ọma Onye-nwe kwere nkwa n’okwu ya na ihe ọ bụla anyị rịọrọ maka ikwere, anyị ga-enweta.
Kedu ka i kwesịrị isi kpee Jehova ekpere ekpegara Saint Nicholas nke Bari ekpere maka nchebe?
Fọdụ ndị kwere ekwe na-atụ aro ịme novenarios, nke gụnyere ikpe ekpere abalị itoolu ma ọ bụ ụbọchị itoolu, na-aga n'ihu.
Nke a dị ire ma nwee ike rụọ ọrụ n'okwu ndị ahụ na-adịghị oke mkpa ebe ọ dịkwa mkpa ka anyị nwekwuo okwukwe. Agbanyeghị, ụzọ dị mma iji mee nke a na ekpere ọ bụla bụ ịgbaso mkpali nke obi na okwukwe na mmesi obi ike na a ga-enye anyị ihe anyị na-arịọ.
Enweghị usoro ọ bụla, agbanyeghị na Akwụkwọ Nsọ anyị hụrụ na okwukwe bụ ngwa ọrụ nke na-agaghị efu n'ihi na ọ bụ ihe na-ekwe nkwa na a ga-enye ọrụ ebube ahụ.
St. Nicholas oge ọ bụla ọ hụrụ na ọ dị njikere inye aka ma nke a bụ ihe ị ga - elekwasị anya.
Gwa ya nsogbu gị ma jụọ maka ihe ịchọrọ, n’ezie, aka ya dị mma ga-enye gị ihe ị na-arịọ.
Atụrụ m anya na ị nụrụla ọ theụ ndị a ekpegara Saint Nicholas nke Bari ekpere maka nchebe.
Ike kpegara Saint Catherine nke Siena ekpere
Ekele siri ike nye Nwa Agbọghọ nke Carmen